Home » သတင်း » IBC 2017 မှာမိတ်ဆက်တိုက်ရိုက် OTT Transcoding Software များပေါ်လာ
IBC 2017 မှာမိတ်ဆက်တိုက်ရိုက် OTT Transcoding Software များပေါ်လာ
အမ်စတာဒမ်, စကျတငျဘာ 12, 2017 - အင်တာနက်ကို၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်သည်။ ဒါကြောင့်လည်းအစွမ်းထက်ကွန်ပျူတာများ, ဘက်ပေါင်းစုံတီဗီ, တက်ဘလက်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများများ၏ပျံ့နှံ့မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားပေါင်းစပ်အချက်များကြည့်ရှုနီးပါးမည်သည့်ပုံစံအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထုတ်လွှင့်မှဗီဒီယိုအကြောင်းအရာလက်ခံရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ အများပြည်သူအင်တာနက်ကနေတဆင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာနာမည်ကျော်လိုင်းများ၏ပိုပိုပြီးအမျှကြည့်ရှုခွင့်ပြုဘို့ယူမှစတင်နေကြသည်။ အကြောင်းအရာနှင့်ကွန်ရက်ကအခြေခံအဆောက်အအုံပံ့ပိုးပေးဘို့, ဒီတူညီတဲ့ကုန်ပစ္စည်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပိုမိုဖြစ်စေ: မသက်ဆိုင်အသုံးပြုသွားမည်ဖြန့်ဖြူးကွန်ရက်များနှင့်ကြည့်ရှု devices များ, မျိုးစုံကို formats အပေါ်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုအတှေ့အကွုံကယ်နှုတ်တော်မူရန်။ ဒီအဆုံး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆော့ဖ်ဝဲကို transcoding ဖြေရှင်းချက် ပို. ပို. ဝယ်လိုအားကောင်းနေသည်။
ဒီလမ်းကြောင်းသစ်အသိအမှတ်ပြု, ပေါ်လာ ယင်း၏မိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ် OTT Transcoding Software များအသက်ရှင်နေထိုင် at IBC 2017 (မတ်တပ်ရပ် 1.C61) ။ အဆိုပါထငျရှားပွဆော့ဝဲ Portfolio ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ဖြေရှင်းချက် COTS ဟာ့ဒ်ဝဲအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အရည်အသွေးမြင့် multiscreen န်ဆောင်မှုများကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အော်ပရေတာနိုင်ပါတယ်။ encoding ဖြေရှင်းချက်၏အဓိကတက်အောင်; transcoding မီဒီယာ profile များကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးသို့စီး။ encoding အရည်အသွေးကိုအဆင့်ဆင့်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အမြန်နှုန်းကုန်ချင်းလဲလှယ် vs. ကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးကိုအောင်မြင်ရန်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် rescaling, de-ချုံ့, ဘောင်-မှုနှုန်းပြောင်းလဲခြင်းနှင့်လိုဂို-သွင်းရွေးချယ်စရာရုပ်ပုံလွှာစုံလင်သောဖန်သားပြင်အာမခံပါသည်။
"ဒီတိုက်ရိုက် OTT Transcoder အရည်အသွေးမြင့် multiscreen န်ဆောင်မှုမကယ်မလွှတ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပေးသည်" တဲ့ Carl Walter Holst, CEO ဖြစ်သူပေါ်လာလို့ပြောပါတယ်။ "လူငယ်ကဏ္ဍ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ OTT ဒိုမိန်းအတွက်မဆိုစက်ပစ္စည်းအတွက် optimized ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ချစွာငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ IBC မှာဒီဖြေရှင်းချက်ကိုတင်ပြနိုင်ဖို့မျှော်လင့်, ငါကျနော်တို့ပိုက်လိုင်းများတွင်အများအပြား် software များဖြေရှင်းချက်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌လာမယ့်ကြောင်းကိုအလေးအနက်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ "
ရဲ့ပေါ်လာတိုက်ရိုက် OTT Transcoder စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်စဉ်အတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကုဒ်သွင်းစောင့်ကြည့်။ စီးပွားဖြစ်ပြောင်းလဲနေသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုယန္တရား၏ပေါင်းစည်းမှုမှတဆင့်စနစ်ဟာအလိုအလျောက်တည်ငြိမ်ဘောင်နှုန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အရည်အသွေးမြင့် setting များကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့် encoding ကမြန်နှုန်းအတွက်မျှော်လင့်မထားတဲ့ spikes မှဓါတ်ပြုပါသည်။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းဗဟို interface ကိုမသက်ဆိုင်ဆာဗာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏နံပါတ်, စီမံခန့်ခွဲမှု၏လွယ်ကူခြင်းသေချာ။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ interlacing ရှိနေပါသည်တူသော encoding setting များကိုလွယ်ကူများစွာသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပင်ရာချီမှတစ်ဦးစနစ်အတက်စကေးမှအောင်, ရလာဒ်ကဒိအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
ပိဖြစ်လာရာမှဆာဗာများကိုတားဆီး, စျေးကွက်အပေါ်အလားတူဖြေရှင်းချက်, စွမ်းဆောင်ရည် transcoding စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အအစီအမံများနှင့်မော်နီတာကနေသူ့ဟာသူကွာခြား။ မျိုးစုံသောဆာဗာကိုဖြတ်ပြီးပမာဏဝေမျှသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအားဖြင့်, စနစ်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ system ကိုတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထား။ ဆာဗာကကျရှုံးခြင်း၏အမှု၌, တစ်ဦး redundancy စနစ်ကနိမ့်ဆုံးမှအစီအစဉ်ကိုကြားဖြတ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, အားလပ်ချိန်မှာစွမ်းရည်နှင့်အတူဆာဗာထိခိုက်နစ်နာန်ဆောင်မှုလှုံ့ဆော်ပေး။
ပေါ်လာဘန်ကောက်, ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာတစ်ဦးအပိုဆောင်းရုံးနှင့်အတူ, အော်စလို, နော်ဝေးအခြေစိုက်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းအသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုကိုကယ်နှုတ်သောအော်ပရေတာဖွကြောင်းကမ္ဘာ့အဆင့်မီစက်ကိရိယာများထုတ်လုပ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအအိမ်သို့ Real-time အကြောင်းအရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါရှာဖွေနေအော်ပရေတာများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, ဝင်ငွေ-generation နှင့်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲထံအပ်နှံသည်။ headends modular မြင့်မားသိပ်သည်းဆနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်နေကြပါတယ်ပေါ်လာပါသည်။ www.appeartv.com
Wisycom DP က Nicholas Donnelly နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလားသွားလာ - ဇူလိုင်လ 18, 2018
အသံလွှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများ, Inc (BTS) နဲ့ IMT Vislink ကြေညာချက်များ Reseller မိတ်ဖက် - ဇူလိုင်လ 12, 2018
DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအမည်များနယူးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်းပံ့ပိုး & လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမန်နေဂျာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာပစိဖိတ်အနောက်မြောက် - ဇူလိုင်လ 12, 2018
တီဗီပေါ်လာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ IBC IBC 2017 ပေါင်းစည်းမှု ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-09-12
ယခင်: ပိုးစုန်းကြူးရုပ်ရှင်ရုံ IBC6မှာ FireDay ဒစ်ဂျစ်တယ်နေ့စဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ V2017 ခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
နောက်တစ်ခု: အမိုင်နို Minerva 10 အဆင့်မြင့်လစာ-TV ကိုပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ-Aria devices များ certifies
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "IBC 2017 မှာမိတ်ဆက်တိုက်ရိုက် OTT Transcoding ဆော့ဝဲငျထငျရှား" ။ http://www.broadcastbeat.com/appear-unveils-live-ott-transcoding-software-at-ibc-2017/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။